DOORASHADA NOOCYADA UGU WEYN EE STRAWBERRY - STRAWBERRIES
Strawberries ama strawberries beerta waa kuwo udgoon oo casiir leh, macaan oo jeclaada by qof kasta oo da 'yar ilaa da'. Way adagtahay in la la kulmo qof aan jeclaan laheyn cayayaanka shimbiraha ee qaab cusub ama macmacaan, iyo kuwa ku beerta dalagga aaggooda, waxay doonayaan in ay had iyo jeer noqdaan kuwo waaweyn iyo kuwo badan.
Iskujirka noocyada kala duwan ee strawberries waaweyn, kuwaas oo u muuqday iyada oo loo marayo dedaallada reer Holland. Beeraha dhaqanka ayaa si ballaaran u koraya, sidaas darteed afar qaybood ayaa ku filan hal mitir labajibbaaran. Warshadu waxay leedahay caleemo waaweyn iyo jirrido xoog leh. Berry - iftiin, dhalaalaya, casaan. Jidhku waa qaro, laakiin maaha mid adag. Rigidda "Gigantella" bisha Juun, maalmaha ugu horreeya bisha. Kala duwan ayaa jecel waraabinta iftiinka iyo badinta.
Ma taqaanaa? In qarnigii XVIII, dalxiisayaashu waxay bixiyeen strawberries cad, laakiin, nasiib daro, kala duwan ayaa lumay. Strawberry casriga casriga ah waa natiijada ka soo gooyay cananaaska leh strawberry cas.
Faransiiska waxay ku hawlan yihiin kala-duwanaanta noocaan ah, Elsanta waxay ahayd mid ka mid ah waalidiinteeda. "Darlelekt" wuxuu u adkeysanaya cudurrada, wuxuu jecel yahay waraabin badan oo dhirta khudradda ka baxsan. Bushkul xoog leh, si dhaqso ah ayuu u sameeyaa shaarib. Isteroberiga waa weyn, ilaa 30 garaam, waxay ku kala duwan yihiin cagaarka liinta. Darlelekt wuxuu u dulqaataa gaadiidka.
Ingiriisi kala duwan, bartamaha dhexe. Heerka baadiyaha waa qiyaastii 60 cm, waxay ku badan tahay miraha (illaa 3 kg oo duurka). Tirada ugu weyn ee beergooyska waxay hoos u dhacdaa sanadka labaad ee nolosha geedka. Berry wuxuu leeyahay qaab saddex xagal ah oo leh sonkortu, casaan, dhadhanka macaan ayaa leh, laakin waxaa ku leh dareen yar.
Kala-duwanaanta noocaas ah ee soo-saarka ah ee ay soo saartey Nederland. Waa ku habboon tahay qaboojinta jiilaalka. Dhirta weyn ee kala duwan ee this strawberries faafin taajka ah 60 cm dhexroorka, dhirta koraa weyn - caleemo, qaro weyn oo boogaha, iyo, dabcan, berry. Xogta laga helo hal baadiyaha ayaa la ururin karaa ilaa 2 kg oo miro ah. Berry wuxuu yahay casaan jilicsan, casiir leh, sida yaanyo, oo leh qaab isku mid ah.
Xiiso leh Berry ugu weyn waxaa laga diiwaan geliyay sannadkii 1983 goobta beerta ee Rolkston, USA. Berry miisaankiisu yahay 231 garaam ayaan ku faraxsanayn dhadhankiisa: midhaha wuxuu ahaa mid biyo ah iyo mid dhanaan.
Strawberry "Marshal" waa jiilaalka u adkaysta, waxaa loo isticmaalaa in uu kordho xaaladaha, cimilada kulul iyo qabow si siman u wanaagsan. Magaca noocyada kala duwan waxaa u sabab ah abuuraha, Marshal Yuel. Burburka wuxuu leeyahay nidaam xidid adag, kaas oo u oggolaanaya inuu u dulqaado mudada qallalan. Miraha oo ah qaab shanleh ah markii uu bislaaday gaarey culeys 65 gg. Hesho dhadhanka macaan ee leh jimicsi yar. Barafka sare ee berry, oo aan lahayn godad gudaha ah, jidhku waa cufan yahay, casaan casiir leh. Kala duwanaanta strawberry Marshall waxaa lagu kala saaraa iska caabin cudur oo wanaagsan.
Waa muhiim! Si aad u hesho goosashada weyn ee strawberries, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo xaaladaha ku habboon: Chernozem nafaqada, dhinaca koonfur-galbeed ee dhismaha, aashitada ciidda 5-6.5 pH, socodka biyaha dhulka aan ka sareeynin 60 cm dusha dhulka.
"Masha" ayaa hore u raraya. Qalabka isku dhafka ah, dhirta dhexdhexaadka ah si fudud ayaa u dhufan oo u oggolaanaya in badan oo ah jajab. Strawberry "Masha" caan ku ah cufnaanta ballaaran ee berry - ilaa 130 garaam. Waxay casaan ku leeyihiin caarada caddaanka ah, suufku waa uu cufan yahay, oo aan lahayn godad, dhadhanka berry waa macmacaan. Kala duwanaanshuhu wuxuu u nugul yahay isbeddelada heerkulka isbeddelka ah, ma u dulqaadanayo qorraxxad adag, sidaas awgeed waa ka fiicantahay in ay ku dhex dhaliso kuleylka. Intaa ka sokow, "Masha" waxay si wanaagsan u dulqaatay gaadiidka.
Bandhiga Strawberry wuxuu caan ku yahay dhalidiisa. Kuurku wuxuu udub dhexaad u yahay illaa 50 garaam oo miisaankeedu yahay, qaabka beero-galeedka ayaa la jaraa, saddex xagal, mararka qaarkood lakab. Midabka midhaha waa casaan cad, qashirku aad ayuu u yaryahay, ma aha mid adag, casaan. Kala duwanaantu waxay u adkaysaa cudurrada, laakiin ma cafiyo khaladaadka daryeelka.
Cunto kala duwan ee "strawberry" - Honey - hore u bislaaday. Waalidiintiisu waa "Maalin" iyo "Vibrant." Nooc cufan leh nidaam xidid adag, si sahlan u beddesho dhaxan. Shaar wanaagsan oo si fudud loo faafiyo. Fruiting wuxuu bilaabmaa Maajo wuxuu soconayaa ilaa June. Berry wuxuu ku jiraa qaabka koollada, midab casaan leh, oo leh saxarad cufan, macaan dhadhan.
Kala-duwanaanta kala duwan ee strawberry, waxaa la aaminsan yahay in qoraaga ee kala duwan yihiin iska leh Japanese breeders. Burbur weyn wuxuu leeyahay caado aad u weyn. Buundada ayaa ah saddex xagal oo qaab leh lakab, casaan mugdi ah ku dhowaad bunni midab leh, miisaankeedu yahay ilaa 110 garaam.
Waa muhiim! Kala duwan ayaa u nugul cudurada fangas, sidaa daraadeed looma beerin dhumuc, aan ka badnayn afar duurka halkii mitir labajibbaaran.
Kala duwan ee hore ee strawberries "Eldorado" wuxuu ku leeyahay asalkiisa jinsiga Maraykanka. Kala duwanaanshuhu wuxuu leeyahay difaac sare oo cudurka ah, adkaysiga qaboobaha iyo dulqaadka gaadiidka. Berry waxaa lagu kala saaraa tiro badan oo sonkor ah ee halabuurka, waxay leeyihiin hilib macaan, casiir leh, oo leh caraf macaan, miisaanka midhaha waxay ku saabsan tahay 90 garaam. Iyada oo daryeel ku habboon ka mid ah baadiyaha ah ururin kartaa ilaa 1.5 kg ee berry.
Had iyo jeer waxay dhacdaa in qurux badan oo qurux badan, qurux badan, dhadhanka cagaarka ah ee dhadhanka cagaarka ah oo aad u xun, oo adag oo inta badan ku madhan gudaha. In this article, noocyada strawberry la doortay leh sifooyinka wanaagsan dhadhan iyo cabbirka. Wax-soosaarkooda waxay ku xiran yihiin dareenkaaga iyo daryeelkaaga.